September 2018 – AsiaApps
အသုံးပြုသူအချို့ထိတွေ့ခွင့်ရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Messenger ရဲ့ User Interface ဒီဇိုင်းအသစ်
September 28, 2018 September 28, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on အသုံးပြုသူအချို့ထိတွေ့ခွင့်ရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Messenger ရဲ့ User Interface ဒီဇိုင်းအသစ်
Facebook ဟာတော့သူ့ရဲ့ Messenger app ကို အသုံးပြုသူတွေအသစ်အဆန်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုခံစားရအောင် User Interface (UI) ဒီဇိုင်းပြန်လည်ရေးဆွဲပြီး ထုတ်လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလတုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ F8 Facebook Developer Conference မှာကတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ Facebook ဟာသူပေးခဲ့တဲ့ကတိအတိုင်း…
Facebook Stories, Messenger Stories တွေမှာ ကြော်ငြာထည့်သွင်းဖို့ အစီအစဉ်ချလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Facebook
September 27, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on Facebook Stories, Messenger Stories တွေမှာ ကြော်ငြာထည့်သွင်းဖို့ အစီအစဉ်ချလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Facebook
အသုံးပြုသူတွေထက် လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကို ပိုပြီးစဉ်းစားပေးထားတယ်ပဲပြောရမလား… Facebook ဟာတော့ သူ့ရဲ့ ပြိုင်ဖက် Snapchat ဆီက မွေးစား Feature တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook Stories နဲ့ Messenger Stories တို့မှာ ကြော်ငြာ (ads)…
ကားပိုင်ရှင်တွေဆောင်ထားသင့်တဲ့ ZECAR – Car Owners Network
September 27, 2018 WaziynReviewsNo Comment on ကားပိုင်ရှင်တွေဆောင်ထားသင့်တဲ့ ZECAR – Car Owners Network
Hello…. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကားပိုင်ရှင်တွေအတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ app လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ ကားတစ်စီးကိုထိန်းသိမ်းရတယ်ဆိုတာတကယ်တော့လွယ်ကူတဲ့အလုပ်မဟုတ်တာကိုကားပိုင်ရှင်တိုင်းသိကြပါတယ်။ ကားကအရာရာအဆင်ပြေနေရင်ကောင်းပေမယ့်တခုခုချို့ယွင်းပြီဆိုရင်တော့ခေါင်းခဲရပါပြီ။ ကျွမ်းကျင်သူတွေအနေနဲ့ကားကိုကိုယ်တိုင်ပြင်ဖို့ကိစ္စမရှိပေမယ့် ကားနဲ့သိပ်မရင်းနှီးသူတွေအတွက်ကတောကိုယ့်ဘာသာပြင်ရတော့မယ်ဆိုရင်မလုပ်တတ်မကိုင်တတ်ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ဖြေရှင်းနည်းတစ်မျိုးပဲရှိပါတယ် တတ်သိနားလည်သူတွေလိုက်မေးရပါတော့မယ်။ ZECAR – Car Owners Network app ဟာကားပိုင်ရှင်တွေအတွက်သီးသန့်တည်ဆောက်ပေးထားတဲ့ social…
OnePlus 6T ရဲ့ Specs အချို့နဲ့ တရားဝင်ချပြမိတ်ဆက်မယ့်ရက် သိရှိရပြီ
September 26, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on OnePlus 6T ရဲ့ Specs အချို့နဲ့ တရားဝင်ချပြမိတ်ဆက်မယ့်ရက် သိရှိရပြီ
OnePlus ရဲ့လာမယ့် Flagship 6T က အောက်တိုဘာလထဲမှာထွက်ရှိလာမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့သိထားပေမယ့် အခုဆိုရင်တော့ တရုတ်နိုင်ငံ Social platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Weibo ကနေတဆင့် 6T ထွက်ရှိမယ့်ရက်အတိအကျကိုပါ သိရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ချပြမိတ်ဆက်မယ့် ရက်စွဲအတိအကျကတော့ Launch…
OnePlus6မှာ ဘာFeature အကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းမှာ လှောင်ပြောင်တဲ့ကွန်းမန့်တွေသာရရှိခဲ့တဲ့ OnePlus
September 25, 2018 September 25, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on OnePlus6မှာ ဘာFeature အကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းမှာ လှောင်ပြောင်တဲ့ကွန်းမန့်တွေသာရရှိခဲ့တဲ့ OnePlus
OnePlus ဟာတော့ OnePlus 6T ကို Official မချပြခင် ကပ်တိုးလေး “OnePlus6မှာဘယ် Feature တွေအကြိုက်ဆုံးလဲ?” ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို Twitter ကနေတဆင့်ပြီးခဲ့ရက်ကပဲ သူ့ရဲ့ Fan တွေကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။…
Watch Series4အတွက် Teaser video တွေဖန်တီးချပြခဲ့တဲ့ Apple
September 24, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Watch Series4အတွက် Teaser video တွေဖန်တီးချပြခဲ့တဲ့ Apple
September event မှာ iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr တို့နဲ့အတူ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Apple Watch Series4ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၁…
Pixel model မဟုတ်ပေမယ့် Digital Wellbeing ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ Nokia7Plus
September 21, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Pixel model မဟုတ်ပေမယ့် Digital Wellbeing ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ Nokia7Plus
Google LLC ကဖန်တီးထားတဲ့ Digital Wellbeing app ဟာ google ရဲ့ Pixel မော်ဒယ်ဖုန်းတွေမှာသာအသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပေမယ့် Android9Pie နောက်ဆုံး Beta version မှာတော့ Nokia 7…
အရသာရှိရှိဝိတ်ချနိုင်စေမယ့် Super Food
September 20, 2018 WaziynReviewsNo Comment on အရသာရှိရှိဝိတ်ချနိုင်စေမယ့် Super Food
Hello……. foodie လေးတွေရှိလား? ??? ရှိရင်လက်ထောင်ထားပေးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ post လေးကယူတို့အတွက် special ဖြစ်လို့ပါနော်? ။ AsiaApps ကနေပြီးတော့ foodie တို့အတွက်အလန်းစား app လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ သူ့နာမည်လေးက Super Food…
September 19, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Gaming စမတ်ဖုန်းအတွက်ကြိုးစားနေပြီဖြစ်တဲ့ Nokia
အခု စမတ်ဖုန်း လောကမှာဆိုရင် Gaming ပိုင်းမှာအားသာတဲ့ gaming စမတ်ဖုန်းတွေက On fire ဖြစ်လာပြီး ကျွန်တော်အပါအဝင် gamer တော်တော်များများက ဖုန်းဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီဖုန်းဟာ Gaming ပိုင်းမှာဘယ်လောက်အထိစိတ်ကျေနပ်မှုပေးနိုင်လဲဆိုတာ စပြီးကြည့်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လို Mobile…
Apple ရဲ့ နောက်ဆုံး iOS operating system ဖြစ်တဲ့ iOS 12 ဟာတော့ လပေါင်းများစွာ Beta version ၁၂ ခုထွက်ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့မှာတော့ Official…